ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဟာ မက်ဂွာယားကြောင့်လား? မာတာ၊ ဗာရန်း တို့ရဲ့ပါးနပ်မှုကြောင့်လား? - YTV Channel
Home | Sports | ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဟာ မက်ဂွာယားကြောင့်လား? မာတာ၊ ဗာရန်း တို့ရဲ့ပါးနပ်မှုကြောင့်လား?
ယူနိုက်တက်အသင်းရဲ့ ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲဟာ မက်ဂွာယားကြောင့်လား? မာတာ၊ ဗာရန်း တို့ရဲ့ပါးနပ်မှုကြောင့်လား?
မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်အသင်းဟာ ဒီနေ့နံနက်မှာတော့ အိုးလ်ထရပ်ဖို့ဒ်ကွင်းထဲမှာ ဘရန့်ဖို့ဒ်အသင်းနဲ့ ရင်ဆိုင်ခဲ့ရပြီး မြင်ရခဲတဲ့ (3) ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲနဲ့အတူ Clean Sheet တွေကိုပါရယူသွားနိုင်ခဲ့ပါတယ်...
ဒီပွဲမှာ ရရှိခဲ့တဲ့ဂိုးတွေကိုတော့ ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်၊ ရော်နယ်ဒို နဲ့ ဗာရန်းတို့ကသွင်းယူပေးခဲ့ပြီး ဒီဂီယာ နဲ့ လင်ဒီလော့ဖ် တို့ Clean Sheet ရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်... ယူနိုက်တက်အသင်းအတွက်ဦးဆောင်ဂိုးကို အီလန်ဂါရဲ့ဖန်တီးပေးမှုကတဆင့် ဘရူနိုဖာနန်ဒက်စ်က ပိတ်သွင်းဂိုးယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်... အဲ့ဒီနောက် ပထမပိုင်းပြီးခါနီးမှာ ရော်နယ်ဒိုဟာ ဂိုးသွင်းနိုင်ခဲ့ပြီး လူကျွံနေခဲ့တာကြောင့်တစ်ဂိုးနစ်နာခဲ့ရပေမယ့် ပွဲချိန် 61 မိနစ်မှာ ရော်နယ်ဒိုတစ်ယောက် လူချခံခဲ့ရပြီး ပင်နယ်တီရရှိခဲ့ရာ ဂိုးအဖြစ်ပြောင်းလဲပေးသွားနိုင်ခဲ့တာကြောင့် ဒုတိယဦးဆောင်ဂိုးကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါတယ်... ပွဲချိန် 72 မိနစ်မှာတော့ တဲလက်စ် တင်ပေးလိုက်တဲ့ဘောလုံးကို ဗာရန်းက အနိုင်သေချာစေတဲ့ဂိုးအဖြစ် သွင်းယူနိုင်ခဲ့ပြီး အခုလို (3) ဂိုးပြတ်နိုင်ပွဲရရှိစေခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်.....
ဂိုးသမား ဒီဂီယာ က ဘရန့်ဖို့ဒ် တို့ဖိကစားခဲ့ကြချိန် ဖိအားတွေကြားထဲက အဲရစ်ဆင်ရဲ့ကန်ချက်ကိုကာကွယ်ပေးနိုင်ခဲ့ပြီး ထိုက်တန်တဲ့ Clean Sheet ရယူနိုင်ခဲ့တာပဲဖြစ်ပါတယ်... အဲရစ်ဆင်ရဲ့နောက်ထပ်ကန်ချက်ကို ခေါင်းတိုက်ရှင်းထုတ်နိုင်ခဲ့တဲ့ လင်ဒီလော့ဖ်ကတော့ ခက်ခဲတဲ့အခိုက်အတန့်အချို့ကိုရင်ဆိုင်ခဲ့ရပေမယ့် ထိုက်သင့်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်နဲ့အတူ Clean Sheet ပါရယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်.....
ဒီပွဲမှာတော့ ပွဲထွက်ခွင့်ရရှိခဲ့တဲ့ ဝါရင့်ကွင်းလယ်လူ ဟွမ်မာတာ ဟာစိတ်အားထက်သန်မှုနဲ့ ကောင်းမွန်တဲ့ကစားပုံပြသနိုင်ခဲ့ပြီး ပွဲချိန်အစောပိုင်းမှာ တိုနေးရဲ့ဖိအားပေးမှုအောက်ကျရောက်ခဲ့ရတဲ့ ဗာရန်းဟာ နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကစားပုံတွေတိုးတက်လာကာ အနိုင်ဂိုးပါသွင်းယူနိုင်ခဲ့ပါတယ်.....
ဘရူနို လှလှပပသွင်းယူခဲ့တဲ့ ဒီပွဲရဲ့အဖွင့်ဂိုးဟာ သူ့အတွက် ယူနိုက်တက်ကစားသမားဘဝရဲ့ ဂိုး (50) မြောက်နဲ့ ဒီရာသီရဲ့ (10) ကြိမ်မြောက်ဂိုးဖြစ်ခဲ့ပြီး မက်ဂွာယားကတော့ ဒဏ်ရာပြဿနာကြောင့် ဒီပွဲမှာပါဝင်ခြေစွမ်းပြနိုင်ခဲ့ခြင်းမရှိခဲ့ဘူးလို့လည်းသိရှိရပါတယ်.....
ဒါကြောင့် မန်ချက်စတာယူနိုက်တက်ရဲ့ဒီနိုင်ပွဲဟာ ဒဏ်ရာပြဿနာနဲ့မက်ဂွာယား ပါဝင်မကစားခဲ့ရလို့လား... ဒီအခွင့်အရေးကို အံကိုက်လူစာရင်းနဲ့ပွဲထွက်နိုင်ခဲ့တဲ့ နည်းပြရန်းဂနစ် ကြောင့်လားဆိုတာကတော့ ယူနိုက်တက်ပရိသတ်တွေအတွက်စဉ်းစားစရာဖြစ်လာခဲ့ရပြီး အခုလာမယ့် မေလ ၇ ရက်နေ့ ပရီးမီးယားလိဂ်ပွဲစဉ် ၃၆ အဖြစ် ဘရိုက်တန်အိမ်ကွင်းမှာ သွားရောက်ယှဉ်ပြိုင်ကစားမယ့် ယူနိုက်တက်ရဲ့ပွဲထွက်လူစာရင်းကတော့ ဘောလုံးချစ်ပရိသတ်တွေကြား စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းဖို့ရှိလာခဲ့ရပါပြီ.....